Falam, February 28 lamzawh ruang ah rak tlaih mi minung3chung in Salai Kyaw San le Salai Za Lian thlah than an si – Buanchukcho
Falam, February 28 lamzawh ruang ah rak tlaih mi minung3chung in Salai Kyaw San le Salai Za Lian thlah than an si, Salai Bawi Hlei Cuang bel thlahasi rih lo Salai Kyaw San le Salai Za Lian hi thla nga hnu ah an thlah hnaasi i COVID zawtnak an ngeih ruang ah inn ah tin lo in sii-inn ah kalpi an si tiah kan theih.
၂၈.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ဖလမ်းမြို့မှ ပြည်သူများ စစ်ကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းခြင်းကို အလိုမရှိကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်စဥ် စကစမှ မျက်ရည်ယိုဗုံးများဖြင့် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲကာ ဖမ်းဆီးခံဲခဲ့ရသော လူငယ်သုံးဦးအနက် ဆလိုင်းကျော်ဆန်းနှင့် ဆလိုင်း ဇာလျန်တို့မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး (၅)လခန့်ကြာပြီ နောက် ယနေ့ ၃၀.၆.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
သို့သော် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးထံတွင် COVID ရောဂါစစ်ဆေးရာ၌ ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရှိခဲ့ရာ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ၎င်းနေ့ရက်တွင်ပင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ ဆလိုင်းဘွဲ့လှိုင်ကြွမ်းမှာ လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ Falam CDM Supporters. The Hakha Times
Falam Palik Thonginn inaLuatmi Mino2COVID-19 an Ngeih caah Sizung ah an Lanhpi Hna